Pump Man Male(10 persons) at Regency Material Trading Co., Ltd | MyJobs
/ Pump Man Male(10 persons)
Pump Man Male(10 persons)
1. စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်သို့ လာရောက်သော customer ၏ ကားများကို ဆီဖြည့်ပေးခြင်း။
2. ဆီဘောက်ဆာ ကားမှဆီသိုလှောင်ကန်ထဲသို့ ဆီချခြင်း။
3. စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် အတွင်းအပြင်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း။
4. စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်နှင့် ပါတ်သက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ အဆင်ပြေချောမွေ့ စေရန် အတွက် ကူညီပံ့ပိုးမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း။
ဆယ်တန်းအောင် (သို့မဟုတ်) တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ဆဲ ဖြစ်ရမည်။
• အသက်(၁၈ နှစ် မှ ၃ဝ နှစ်) အတွင်းဖြစ်ရမည်။
• Computer Knowledge ရှိသူကို ပိုဦးစားပေးမည်။
1. စကျသုံးဆီအရောငျးဆိုငျသို့ လာရောကျသော customer ၏ ကားမြားကို ဆီဖွညျ့ပေးခွငျး။
2. ဆီဘောကျဆာ ကားမှဆီသိုလှောငျကနျထဲသို့ ဆီခခြွငျး။
3. စကျသုံးဆီအရောငျးဆိုငျ အတှငျးအပွငျသနျ့ရှငျးရေးပွုလုပျခွငျး။
4. စကျသုံးဆီအရောငျးဆိုငျနှငျ့ ပါတျသကျသောလုပျငနျးစဉျမြား အဆငျပွခြေောမှေ့ စရေနျ အတှကျ ကူညီပံ့ပိုးမှုမြားဆောငျရှကျခွငျး။
ဆယျတနျးအောငျ (သို့မဟုတျ) တက်ကသိုလျတကျရောကျဆဲ ဖွဈရမညျ။
• အသကျ(၁၈ နှဈ မှ ၃ဝ နှဈ) အတှငျးဖွဈရမညျ။
• Computer Knowledge ရှိသူကို ပိုဦးစားပေးမညျ။